ကြီးမြတ်ဆုတောင်းပဌနာ။ ? အကာအကွယ် & ပုံနှိပ်ရန် | + တန်ခိုးကြီးတယ်
အဆိုပါခမ်းနား၏ဆုတောင်းပဌနာ၎င်းကိုလည်းခေါ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်၊ ခမ်းနားကြီးကျယ်သောဆုတောင်းခြင်းသည်ဆုတောင်းခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ၊ အပျိုစင်မာရိကိုယ်တိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းခံရသည်။
ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုဆင်ခြင်သောအခါ၊ ငါ့ဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုအမှီ ပြု၍ ဝါကြွားခြင်းကိုပြုမည်။
အကြောင်းမူကား၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ နာမတော်တပါးတည်းရှိတော်မူသောဘုရားသည်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူ။ ၊
မူလ Magnificat (သို့) Magnificat ၏ဆုတောင်းချက်သည်အစွမ်းထက်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ဒီဆုတောင်းချက်ထဲမှာလှပသောအံ့ဖွယ်အမှုများတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောသူများရှိပါသည်။ မကြာခဏတွေ့ကြုံရသည့်အရာမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ခံစားရနိုင်သောချက်ချင်းအံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်သည်။
Magnificat anima mea Dominum၊
quil respexit humilitatem ancillae suae ။
Ecce ကငါ့ကို omnes မျိုးဆက်အကြောင်းပြောပြတယ်။
quna fecit mangna qui potens est,
et sanctum nomen eius၊
brachio suo အတွက်ချို့ယွင်းချက်,
ဖြန့်ဖြူးစူပါစတေးစိတ်ကို Cordis sui,
esurientes implevit အပိုဆု,
etis dimisit inanes ခွဲဝေ။
ပေးစွမ်းပါဝါကိရိယာများ ကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့အကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ (သို့) နေအိမ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်ကားများကဲ့သို့ပစ္စည်းပစ္စည်းများ။
ဒါဟာတိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည် ဆုတောင်းပဌနာ၏ ၎င်းသည်သူ၌တည်ရှိသောယုံကြည်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ဤဆုတောင်းခြင်းကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာသည်ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ထို့ကြောင့်သူသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆုတောင်းချက်ရှိသည်။ သင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဆုတောင်းဖို့ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
အစအ ဦး ၌ဤဝါကျ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကယ်တင်ရှင်ကိုဤလောကသို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်မှုကိုကြွေးကြော်ပါ.
ယနေ့ဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခက်ခဲသောအချိန်မှကယ်တင်ခြင်းအတွက်၊ သူရရှိခဲ့သောအံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အခြားကျေးဇူးတင်လွှာများအတွက်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောဆုတောင်းခြင်းသို့မဟုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်သည်သန့်ရှင်းသောကျမ်းဂန်များ၌အထူးသဖြင့်အခန်း ၁၊ အခန်းငယ် ၂၆ မှ ၂၅ ရှိစိန့်လုကာ၏ G ၀ ံဂေလိကျမ်းတွင်အလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်။
လက်ထပ်ရန်စောင့်နေပြီးအလုပ်မှကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိသောမာရိသည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်တာဝန်နှင့်ဥာဏ်ပညာနှင့်မည်သို့ရင်ဆိုင်ရမည်ကိုသူသိသည်။
ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အလိုတော်ရှိလျှင်ဆုတောင်းရမည်။ အချိန်အရေးမကြီးပါ၊ အရေးကြီးသောအရာသည်ဆုတောင်းခြင်း၏စွမ်းအားကိုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။